100 andro ho an’i Alaa: Isain’ny fianakaviana ejipsiana ny andro mandra-pamotsotra azy avy any am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2018 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Español, Nederlands, Français, Português, Italiano, polski, македонски, عربي, Yorùbá, Deutsch, English
Rehefa nandany dimy taona an-tranomaizina, hivoaka ny fonja ilay Ejipsiana bilaogera sady mpikatroka Alaa Abd El Fattah amin'ny 17 marsa 2019. Tamin'ny 8 desambra ny fianakaviany no nanomboka fanentanana — “100 andro ho an'i Alaa” — mba hiantohana ny hamaranana ara-potoana ny fisaziany am-ponja.
Nosamborina ary nalaina avy tao an-tranon'ny fianakaviany i Alaa tamin'ny Novambra 2013. Mihoatra ny herintaona aty aoriana, tamin'ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy ny farany ary nodidiana higadra dimy taona noho ny “fanomanana” fihetsiketseham-panoherana araka ny lalàna momba ny fanoherana nivoaka taona 2013 izay mandrara ireo karazam-pihetsiketsehana tsy nahazoana alalana. Raha nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana itsarana ny sivily amin'ny fitsarana miaramila izy tamin'ny 26 Novambra 2013, dia tsy nanana andraikitra i Alaa tamin'ny fanomanana izany. Nohamafisin'ny Fitsarana Tampony ao Ejipta ny didim-pitsarana azy tamin'ny Novambra 2017.
Nanoritra ireo tanjon’ny fanentanana ao amin'ny Twitter i Omar Robert Hamilton, zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray na renin'i Alaa:
Nandritra ny fotoana maharitra i Alaa niasa teo amin'ny sehatry ny tetikasan-teknolojia sy ny tetikasam-pikatrohana ara-politika niaraka tamin'ny vadiny, Manal Hassan. Nipoitra avy amin'ny fianakaviana malaza amin'ny fanandrata-teny momba ny zon'olombelona izy, ao anatin'izany ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona antsoina hoe Ahmed Seif El Islam, rain'i Alaa, izay nigadra imbetsaka nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak. Mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny anabavin'i Abd El Fattah, i Mona sy i Sanaa Seif izay efa ela tao amin'ny fanentanana hanoherana ny fitsarana miaramila atao amin'ny sivily. Tamin'ny taona 2016 i Sanaa nihinana am-ponja enim-bolana noho ny fanompana manampahefam-bahoaka ofisialy.
Ny didy azon'i Alaa dia mitovy amin'ny an'ireo Ejipsiana maro hafa izay tany am-ponja noho ny fikatrohan-dry zareo. Maro dia maro tokoa ny gadra politika fa mahatratra 60.000 ao Ejipta, hoy ny filazan'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona. Ireo nosamborina noho ny antony politika matetika ao Ejipta tratran'ny fampanjavonana an-katerena, fampijaliana, fampitomboana ny andro ihazonana vonjimaika alohan'ny fitsarana ary ny fanokana-monina.
Ampirisihana ireo te-hanatevin-daharana amin'ny fanentanana “100 andro ho an'i Alaa” handefa” tantara foronina, saripika na hetsika firaisankina” izay ho avoaka indray ao amin'ny tranonkalan'ny fanentanana: